Yintoni umntu othandayo akwenzayo kwaye athi
Izikhombisi ezimbalwa eziza kunceda ukunqunywa uthando lomntu
Phantse bonke abesifazana bafuna ukuqiniseka ukuba umntu obathandayo uyayivakalelwa ngokunyanisekileyo nangokunyanisekileyo. Yingakho phantse bonke abafazi banomdla kumbuzo: uthini indoda ethandwayo kwaye ithi?
Iimpawu "ezimbalwa" zokuwa ngothando
Kodwa eqinisweni, umbuzo wento abantu abathandayo nabatshoyo inomdla kwaye uyayithanda kakhulu. Enyanisweni, akukho sigaba esisodwa sohlukwano olukhethekileyo, apho ungasifumana khona ngokukhawuleza ukuba uyathandwa ngumntu kunye nokuba ungakanani. Wonke umntu uyazi ukuba ngamnye wethu ngumntu, ngokulandelanayo, kwaye ukubonakalisa iimvakalelo kuthi kuthihluke. Abanye abantu bafunda izibongo, bazinike iingoma baze benze imihla yokuthandana. Kwaye umntu ulungisa ngokukhawuleza zonke izixhobo endlini, uya ezitolo kwaye ancede kuyo yonke into. Kodwa, nangona kunjalo, ekuziphatheni kwazo zonke iintshazana kukho into efihlakeleyo, kodwa enyanisekileyo nangokuthi ngaphandle kwamagama uqinisekisa uthando lwakhe.
Ngokuthetha oko, ukuba umntu ofanayo uyaziphupha, funda apha
Okokuqala, oku kukhangeleka. Njengokuba umntu akazange aphike kwaye akazange afihla imvakalelo, loo nto iya kubonelela. Xa uthanda umntu, ufuna ukujongwa njalo, jonga amehlo akho, funda yonke i-millimeter yomzimba. Kwaye nangona iimvakalelo zizama ukufihla kwaye iimbono zihlala zithatyathwa, nantoni na, ngandlela-thile umntu uyakhohlwa malunga nokulawula nokujonga engqondweni yakhe kwintanda yakhe. Nangona kunjalo, kule mbono kukho ukukhanya okukhethekileyo kwemvakalelo kunye neminqweno. Olu luhlobo oluthile lokumnxusa, oluxutywe kunye neengcamango ezinobomi. Xa indoda ithandayo, umfazi uvakalelwa kukuba bayamjonga njengoyithixokazi. Kulo mbono olubalulekileyo. Ubonisa lonke uhlobo lweemvakalelo zentsha. Kwaye sonke siyazi ukuba uthando lubangela iimvakalelo ezintle. Kubonakala ngathi into enothando iyamangalisa, inhle, iyona nto ingcono kwaye ayilibaleki. Ukuba umfazi ongenalo ithemba kuye, phantsi kwamehlo omntu uqala ukuziva ekhangayo kwaye ekhethekileyo, akungabazeki ukuba lo mfana uyamthanda. Kwaye iimvakalelo ezinjalo kunye noshintsho kwisimo sengqondo kubonakale ngenxa yokuba umntu omncinci uyambona indlovukazi kwaye udlulisela iimvakalelo zakhe kumandla, ngokomgangatho.
Olunye uqinisekiso lothando ekukhulumisaneni kwamagama phakathi kwabantu kukuba, ke, umnqweno wokuthintela umntu. Kwiimeko ezinjalo, loo nto inokuhlala phantsi kwayo, njengokungathi ichaphazela ngephutha ngezandla, kwizinwele - uyayenza ngokufanelekileyo kwaye ingaphephekanga. Nangona uhleli echasene naye, uya kukubamba ngeenyawo zakho okanye uthinte isandla sakho xa into ethile idlula. Eyona nto, ukuba intombazana ihlala isithatha ngezandla zayo, ivale kwiqonga, inqabile iminwe yakhe, ichukumisa iinwele zakhe, ihlale ikhuni, iwanga izandla zayo kwaye ayivumeli ukuba ihambe, mhlawumbi ephusheni - ikuthanda kwaye inyanisekile kwaye ayifuni nto inokubuyisela. Xa iimvakalelo zihlambulukile kwaye zinyanisekileyo, umntu umele nje abe kufuphi nento ethandwayo kwaye ayichukumise. Kwaye, oku akusoloko kuthatha isondo. Kwiimeko ezininzi, zonke zihla kumnqweno wokubonisa uthando nothando ngokuthintela, ukubetha, ukumanga izandla zakho, i-cheekbones, iinwele. Oku kukubonakalisa ukuvakalelwa kweyona nto, into engumzali, xa ufuna, njengokuba uthabathe umthande wakho kumfesane wakho kwaye ukhusele ngokubanga nokukhupha zonke izinto ezimbi kwihlabathi.
Ngokuqhelekileyo, ngokugqithiseleyo indoda ibambelela ibhinqa, ngokunyanzela kuye, iyomelele ngakumbi iimvakalelo zakhe. Ngaloo ndlela, ngokufanayo ufuna ukumkhusela kwababenecala kwaye abonise bonke abanobuchule abakhoyo kuphela kuye kwaye ngokuqinisekileyo akayi kunika nabani na.
Ngokuthetha oko kuthetha, xa umntu ekhupha ephupheni, funda apha
Ukuba umntu uthinta izandla zakho
Abasetyhini abaninzi bakholelwa ukuba isalathiso sothando kukuba umfana unika isandla, uvule iingcango nezinye izinto ezinjalo. Enyanisweni, oku akusibonakaliso sothando, kodwa sisalathisi sokwakhiwa. Kodwa, ukuba umntu akayena oyinyanisekileyo, oku akuthethi ukuba akayithandi ngokwenene. Umfana onjalo ubonisa uthando lwakhe ngezinye iindlela. Mhlawumbi akayi kunika iindidi zeentyantyambo, kodwa yena ngokwakhe uza kufaka iifestile ezintsha endlwini okanye uhlale elungisa imoto yakho. I-Gallantry, ngokuqinisekileyo imnandi kakhulu. Kodwa akubona bonke abantu abanamava abonisa izenzo zabo zothando. Abanye babo bajwayele ukuziphatha ngale ndlela kunye nabasetyhini, kwaye abanye, ngezenzo ezinjalo ziphazamisa ingqalelo yethu kwaye ziphazamise zabo iimpazamo eziphambili kunye neempazamo zabo. Ngoko ke, ukuba ufuna ukuqonda ukuba umntu uyakuthanda ngokwenene, unquma ukuba ufuna kangakanani ukukunceda ngokuziphatha nangokwezimali. Oku akuthethi ukuba umntu omncinci unyanzelekile ukuba ahlale eduduza, ukuqhuba iingxoxo ezingapheliyo malunga nehlabathi lonke, kwaye uyona nto ilungileyo kunye neveki ukuthenga amasongo egolide. Kuye ngenye into. Umzekelo, malunga nokuba unako ukuza kuwe naliphi na ixesha kwaye ulungise iingxaki kwikompyutha (ukunikezelwa kwamanzi, umbane), unokukuthatha emsebenzini ekuhambeni kwesikhathi, kungakhathaliseki ukuba imoto okanye ngezinyawo, nokuba uya kuxhasa kuwe kwiimeko ezinzima zobomi bakho kwaye ufumane iindlela zangempela zokusombulula iingxaki. Inyaniso yokuba lo mntu ulungele ukuthatha inkwenkwezi intombazana evela esibhakabhakeni, oku kulungile. Kodwa, uthando lwangempela alubonakali kwiingcamango ezingabonakaliyo, kodwa nokuba uya kupheka ukutya, xa udiniwe ngumsebenzi okanye uhlambulule indlu ukuba uziva ungalunganga.
Yonke into ithetha ngezenzo
Bonke abasetyhini bakholelwa ekuthandweni kwaye balindela iimvakalelo kuphela ngezenzo zothando. Oku akumangalisi, kuba sonke sikhuliswa kwiifilimu zothando kunye neengoma ezimalunga namakhosazana, apho iinjunja zenza ihashe elimhlophe. Kodwa, ukuba ucinga ngokuhlakanipha kwaye ukhulile, kufuneka uqonde ukuba uthando alubonakali kuphela kule nto, kodwa, ngamanye amaxesha, akukho konke kulo.
Yaye umfana onothando uyabonisa njani iimvakalelo zakhe malunga noko akuthethayo? Indoda ethandwayo izama ukwenza ubomi bomfazi wayo bube lula kwaye buyonwabile. Akazami ukubulala ama-dragons aze ahambe kude ukuzisa umlotha. Kunoko, umntu onothando uya kukhangela iindlela zokufumana imali eyaneleyo yokubonelela umfazi wakhe kwaye akwazi ukuxhalabisa kunye nokusebenza okungadingekile. Umntu onothando uya kuhlala ekhona, kwaye yonke imihla ekujonga kwakhe uya kukwazi ukufunda: Ndiyakuthanda. Yaye xa ekudibanisa, uya kuqonda ukuba akukho zitshixo kunye neendonga, akukho zikhwama ezivela kwiimvanoveli zentombi ziyakwazi ukukhusela kwiinkathazo, njengoko uya kuthanda.
Sihlalutya izizathu zokuba kungani amadoda eziphatha njengabasetyhini
Ungazifumana njani umfana kunye nalapho ufumana khona?
Indlela yokujonga ngaphandle ubukhulu bomntu
Inentsingiselo kunye nembali yesandi somtshakazi
USobchak okhulelwe uyamkela kuSnnvv ngothando
Ukuba wena kunye nomlingane wakho awuhambelani kwi-horoscope
Ihlobo lokuzonwabisa: Ikhekhe lebhayisiki yasekhaya nge-berry glaze
Kwiwebhsayithi baxoxe ngesithombe esitsha seValery Meladze kunye no-Albina Dzhanabaeva
Indoda ethandwayo iya kunikwa impawu
Imikhwa emibi ngexesha lokukhulelwa
Indlela yokudibana nendoda ngobuhlobo obunzulu
Inkululeko yomuntu kwibudlelwane phakathi kwendoda nomfazi
Ukunxibelelana, okanye unayo i-ruble 100, kwaye unamahlobo angama-100
Indlela yokuhlobisa izipikili zakho kakuhle?
Indlela yokukhanga ngamadoda: iindlela ezi-5 ongazange uzive ngazo